Yedu Verified Author Links Mhedzisiro mune 484% Yepamusoro Dzvanya-Kupfuura Rate | Martech Zone
China, December 22, 2011 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kana iwe uri muparidzi, SEO nyanzvi kana chikuva cheCMS, iwe unofanirwa kunge watove nekushandisa nzira ye yakasimbiswa muridzi. rakanyorwa anga aripo kwemwedzi mishoma uye apfuura nekugadzirisa kwakanaka, zvichikonzera chinhu chikuru chinonyatsoita kuti injini yako yekutsvaga ionekwe.
Muchokwadi, ini ndaizobvunza chero kambani yeSEO isiri kusundidzira vatengi vavo kuti vaone kuti vapedza izvi. Ini ndanyora nezve yakasimbiswa muridzi uye sei shandisa zvakapfuma zvinyorwa muWordPress. Hazvisi nyore sekudonhedza mu plugin (zvakadaro), asi zvakakosha.
Sei? Google ine pakupedzisira yakapa iyo data kuratidza kuti unobudirira sei kuva nemufananidzo wako wemunyori wakasimbiswa mumhedzisiro yekutsvaga. Mukati Google Search Console, pane ikozvino chikamu muLabhs yakatsaurirwa kuteedzera yako yakasimbiswa mapeji emunyori:
Mukati meMartech, pane 484% musiyano mubhatani-kuburikidza nemutero pane edu akasimbiswa munyori zvinongedzo muKutsvaga Injini Mhedzisiro Mapeji (SERPs) kupfuura pane edu mamwe mapeji. Izvi zvinoreva kuti vanhu vangangoita ka5 mukana wekubaya pane zvinongedzo zvedu nemunyori pikicha pane zvinongedzo zvisina iyo muSERP.
Kana iwe uri muparidzi uye usati waita rel = munyori, rel = ini uye muparidzi zvinongedzo, unofanirwa kuzviita nekukasira. Kana iwe uri SEO nyanzvi, iwe unofanirwa kunge uchimanikidza vese vako vatengi kuti vashandise iyi mhinduro. Kana iwe uri CMS, chimiro ichi chinofanirwa.
Tags: google webmastersGoogle +mutsikisirel munyorirel inirel = munyorirel = iniWebmaster
Zvita 22, 2011 na3: 57 PM
Ini ndanyora nhanho nhanho yekushandisa "rel = munyori" iyo vashandisi veWordPress zvandinoona zvichibatsira. Unogona kuwana iyo dzidziso pano:
Iyo inokuratidza maitiro ekuzviita uchishandisa Google yazvino mirairo - kureva nzira yakapusa. Iwo ma484% mazinga ekuvandudzwa kwekudzvanya kuburikidza nemutengo anogona kusaturikira kune wese munhu ipapo ipapo, sezvo zvinoita sekunge iwe unoda zvakati wandei zvemagariro Klout kana munyori mifananidzo iri kuratidza (zvirinani ikozvino). Chero izvo kana izvo mifananidzo zvisati zvaburitswa kwese kwese. Kana paine anoziva ndapota taura.
Zvita 22, 2011 na4: 15 PM
Thanks Elizabeth! Takanyatsoona kumwe kusarongeka pakuratidzwa kwemifananidzo iri paKutsvaga Injini Mhedzisiro Mapeji. Sezvo Google iri kuramba ichivandudza kunyorera uye kuburitsa zvimwe zvinowedzera, ndine chokwadi chekuti tichafanirwa kugadzirisa zvishoma pano nepapo!
Kukadzi 28, 2012 na10: 21 PM
Mufananidzo wangu wakatanga kuratidza pakupedzisira. Yakatora chinguva. Isu takaisa zvakare WordPress dudziro kubatsira kuita Authorship markup. Ndokumbira kuti uone zvaunofunga - inonzi AuthorSure uye inogona kutorwa pasi mahara kubva kuWordPress.
Kukadzi 28, 2012 na10: 46 PM
Kwakanakisa, Elizabeth! Ini ndanga ndichifunga nezve kunyora imwe asi izvi zvakanyanyisa kuwanda kupfuura zvandaive ndichironga. Kutenda nekugovana nesu!
Kukadzi 21, 2012 na6: 59 PM
Ndakaona 38% ichiwedzera mukubaya kwangu kuburikidza neexercandworkwork.com uye vanhu vazhinji havana chokwadi. Asi nhamba yacho hairevi nhema!
May 18, 2012 pa 2: 58 PM
Hmmn, kuverenga kwakanaka, uye ini handishamiswe, asi isu hatina iyo "Author Stats" mune edu webmaster maturusi, kunyangwe isu tine kunyorwa kwakasimbiswa.